Bheka ngokwakho ephupheni uhamba, kusho ukuthini? Ukuchazwa kwengqondo yokulala
Ukuzibona unqunu ebuthongweni bakho
Iyini isixwayiso mayelana nephupho lapho uzibona uhamba khona? Ukuchazwa
Ekuseni ukukhumbula izithombe oziphuphile, kubalulekile ukucabangela hhayi kuphela imininingwane yephupho, kodwa futhi ngokufanele ukuhlola ukuzwa kwangaphakathi kwakho, njengoba lokhu kubonakala ngokuqondile ekuchazeni iphupho. Lokhu kusebenza nasemaphupho lapho umuntu ebona ehamba khona. Kulesi sihloko, sinikeza izibonelo zokuhumusha okulungile kakhulu futhi sibheke izinketho ezahlukene zamaphupho.
Ukuzibona unqunu Ukuhamba uhamba-ze: incazelo yokulala Okunye ukuhumusha okudumile
Okuningi kuxhomeke endleleni ozizwa ngayo lapho ubulele ngokuphelele ephusheni.
Ukuzithanda ngomuzimba wakho wezinqunu kufakazela ukuthi uqiniseke ngokweqile, futhi akunjalo ngaso sonke isikhathi. Kufanele ubuyekeze ngokuziphatha kwakho. Mhlawumbe, kulokhu kungamanga impande yazo zonke izinkinga nezinkinga ongahlukumezi ngazo.
Ukuzonda nokuzwa amahloni umuntu azizwayo lapho ebheka isidumbu sakhe kufanele kubhekwe njengesixwayiso. Sidinga ukunakekela impilo yethu nedumela phakathi kwabangane kanye nozakwethu.
Uma uphupha wena uhamba-ze, khona-ke kukhona okunye okukhathazayo mayelana nokufaneleka kwesimo sokuziphatha esikhethiwe. Umzwelo wokungaqondakali ongavela emibonweni yasebusuku ingabonakalisa empeleni. Ngakho-ke ukuqonda kwakho kukutshela ukuthi uziphatha ngokweqile futhi ungalondekile futhi yingakho ungeke ukwazi ukuphakamisa izinga lezemisebenzi noma ukufezekisa ezinye izinhloso ezifunwayo.
Hamba uhamba-ze: incazelo yokulala
Okuvamile kakhulu umbono, lapho umuntu esesixukwini esikhulu sabantu, kodwa ngokuzumayo uyaqaphela ukuthi akanalo izingubo nhlobo. Njengasezindabeni zangaphambilini, ukuchazwa kokulala kuthonywe ngokuqondile yizizwa ezitholwe yilophu.
Ukuzizwa unamahloni kuhle. Mhlawumbe, lophupho unesifiso esiyimfihlakalo noma esifihliwe, kodwa ngenxa yalolu phupho, akekho ozokwazi ngalesi "skeleton ekamelweni".
Hamba uyehamba emgwaqweni omatasa futhi ungazizwa uhlazo ngesikhathi esifanayo kufanele uthathwe njengesilumkiso. Ukuziphatha kwakho kuyingozi futhi esikhathini esizayo kungaholela emiphumeleni engathandeki. Futhi uma ubungenabo uhamba kuphela, kodwa futhi ngaphandle kwekhanda, kufanele uqaphele. Ukweqisa ngokweqile kuzoholela ezinkingeni ezinkulu futhi akukho isiqinisekiso sokuthi uzokwazi ukunqoba.
Incazelo yokulala, lapho uzibona uhamba khona endaweni ematasa, kodwa zama ukumboza okuthile ngobunqunu bakho, ubonisa umzabalazo wangaphakathi wohlamvu lwakho. Ngokuvamile lokhu kuphathelene nezifiso zangasese, eziphikisana nedumela. Uma uqhubeka ukhuluma ngemizwa yakho ngokungenangqondo, ukwethembeka kwakho phakathi kwabanye kungabhekana kakhulu.
Okunye ukuhumusha okuthandwayo
Njengoba sesivele sikhulume ngenhla, udinga ukukhumbula hhayi kuphela ukubukeka komzimba wakho we-naked, kodwa futhi nemizwa oye wahlangabezana nayo.
Okudumile ukubhalwa ukuthi ukuzibona uhamba futhi ujabulele umzimba wakho uthembisa ukuthuthukiswa kokuqala enhlalakahleni kanye nesimo sezezimali.
Uma lowo uphuphayo ebona ukuthi umzimba wakhe wezinqunu ugcwele amagundane nezilonda, khona-ke udinga ukulungisa ngokwengqondo izinguquko ezimbi empilweni yakhe.
Encwadini yephupho kaLofa kulotshiwe ukuthi owesifazane ozibonele engelaphupho kufanele alungise izinguquko zamakhadiali empilweni. Bayoba nomphumela omuhle, kodwa kungalindelekile ukuthi ekuqaleni owesifazane uzothola inhloni enkulu.
Ukuhumusha kwephupho likaMiller kunikeza izibikezelo ezincane ezingalindelekile. Kuthi intombazane eyayihlonipha umzimba wayo ongcolile ephusheni izothola inhlanhla ngokuzumayo, kodwa le nkathi izoba yikhashana kakhulu. Kodwa imizwelo emibi ichaza ukuthi kulowo ophuphayo kufika esikhathini sokuxabana nokuxabana futhi kufanele abe ngaphezulu.
Ukumba amazambane ngephupho
Iphupho lokuhumusha: incazelo yesimanje yamaphupho
Ingabe kufanelekile ukukhathazeka uma ugogo wegogo efika ephusheni
Incazelo yephupho ngokumanga nomfana
Lithini iphupho lasejele? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Ukuthola izinkinga zokukhulelwa nokubeletha
Kufanele wenzeni ngaphambi kokuba umfana angalahlekelwa isithunzi sakhe?
Shish kebab in kazan
I-Potato casserole ne-turkey ne-ananas
Umshado womshado njengenye indlela yomshado osemthethweni
Ingabe nginokucindezeleka, kufanelekile ukushintsha isimo?
Indlela yokukhetha ihembe elihle lamantombazane
I-Horoscope yama-Aries-abesifazane ngo-November 2016
Irises - umhlobiso omuhle wegadi
Indlela yokukhipha umuntu ekudleni ekhaya
Udinga umntwana wokubeletha usana
Isobho se-pea esiphundu
Anti-cellulite ukugoqa ngobumba